Ukuthabatha okuthabathayo ukusuka kwiTaberna kwakukho i-Top-Notch!
AmaRoma ayethanda ukuthatha njengento esenzayo. Kodwa kutheni kubanjwe i-'n' go grub yayithandwa kakhulu emva koko?
Iqwengulwe: IBhayibhile yaseRoma yaseRoma
Uninzi lwabantu baseRoma ngokwabo mhlawumbi behlala kwiibhloko zezindlu ezibizwa ngokuthi i- insulae , apho babehlanganiswe khona kwiimeko ezingenasimo kwaye eziyingozi. Kwakungekho gumbi elaneleyo kubantu, makungabikho iikhikhi ezikhethiweyo kakuhle, kwizakhiwo ezininzi zamabali, ezazithengela abaqeshi kwaye zanikela indawo encinane ukuya phezulu.
Babenaloo nto abantu banamhlanje abaza kubona iimfuno ezisisiseko, njengamathoyilethi athile, amagumbi okuhlambela okanye amaziko okupheka. Akukho ndawo ekhitshini eyayithetha ukuba amaRoma ayengakwazi ukupheka ekhaya. Ngenxa yoko, kwakufuneka baphume baye bathenge ukutya okulungiselelwe, mhlawumbi badle kwii-snack bar bars, okanye i- tabernae , okanye babuyisele kwi- domus, okanye ekhaya.
Ngoko indlela yaseRoma yamaxabiso ayisebenzisayo yaphela ekukhuthazeni ukutya ngaphandle kweetabernae , ezaba ngamaziko asezidolophini. Ingxelo nje: abaphengululi banamhlanje bangakufumanisa nzima ukuhlula phakathi kwemigaqo yamandulo yamabhodlela e- snack, njenge- taberna, i-caupona, kunye ne- popina, kodwa bonke banemibutho ye-foodie. Kwakukho nezinye iintlobo zeetabernae, iivenkile ezizimeleyo okanye iindawo zokusebenzela, kodwa igama kwi-scholarship yanamhlanje libhekisela kwiivenkile zokutya.
Abadala be-Archaeologists baye bafumanisa amakhulu eetabernae kwizixeko ezinjengePompeii (118 kuloo dolophu kuphela!), I-Herculaneum, ne-Ostia, kwaye baye bafaka iimpawu ezintle, ezininzi zazo zagqitywa ngenkomfa yakutshanje kwiYunivesithi yaseNew York ethi "Ukudla kwamaRoma kunye Isidlo: Yintoni, phi, kunye nendlela amaRoma adla ngayo. "
Njengomnye wezithethi, uJohn Donahue, ochazwe kwi -Community Community kwiTable ngexesha leNqununu, "badlala indima ebalulekileyo kwisakhiwo soqoqosho esi sixeko." I- Tabernae ithengise ukutya kokutya okulungiselelwe kunye nezinye izinto zokutya-kubalulekile ukuba kuqaphele ukuba ezongezelelweyo iimarike zokutya zangaphakathi ezibizwa ngokuba yi- macella; bezungezwe i-taverna.
Kwakukho nabakhweli besitrato, ubungqina bemivubukulo obuthathaka.
Njengomphumo wabathengi abaninzi abadlayo ekuhambeni, i- tabernae yaba ngamacandelo enkcubeko, uhlobo apho abantu abaninzi beeklasi ezahlukeneyo-abakhonzi, abakhululekileyo kunye nabemi-bahlanganisene, baxoxwa, baxoxwa. Yintoni abayidlayo? Iwayini kwiindlela ezininzi; izinto ezibhaka; inyama ephekwe ezininzi iindlela ezahlukeneyo, ukusuka kwi-sausages ukuya kwi-stews; kunye neziqhamo ezininzi kunye nemigodi. Owe, kwaye mhlawumbi kwakukhona nesondo esithintekayo, naye.
Graffiti kunye neGossip
I-Tabernae yayivame ukuhlala kwindawo yokuqala ye- insulae , eqeshwe ngabanini bezindlu. Ubungqina bubonisa ukuba i- tabernae inokudibaniswa ne- insulae ngokusebenzisa iingcango zangaphakathi-ngokulinganayo ukulingana nokushiya iofisi yakho okanye isakhiwo sezindlu ukuze uye kwi-Starbucks. Abasebenzi be-abernae kwiinqununu eziqhotyoshelwe kwiibhloko zezindlu mhlawumbi babenezibophelelo kumnini wesakhiwo; nokuba ngaba bengamalungu entsapho okanye ngaba ngamalungu omndeni waseRoma, onenkcazelo ebanzi yegama, akaziwa. Kuba abo bantu abangekho ngabanye, kubakho ubungqina bokuthi amaqela athengwe kwiintambo zeevenkile zokutya.
Abadala beemvubukuli banamhlanje bangachaza njani i- taberna okanye akunjalo? Isalathiso sawo sasingumgca wokuhamba ngokubhekiselele kwisitalato, apho abanikazi beevenkile babeza kubonisa khona izinto ezithengiswayo.
Unokwazi ukuhamba ngokukhawuleza kwaye ubambe ukuluma ukuba udle, jonga ukuba zithini iimfuno zemihla ngemihla, okanye nje uxoxe ne-cutie ngasemva kwe-counter. Ngaphakathi ngaphakathi, kwakukho izitya ezinkulu zokugcinwa, mhlawumbi zizele ngezinto ezimileyo, kunye neetrafiti!
Loo graffiti ubonise ubungqina obuncedo kubo bazama ukuqonda ukuba zezi zintengiso zisebenza ntoni. Imenyu yebhayibhile yemenyu ibonakala isaphila, kodwa uKristina Milnor uhloniphekile kwiGraffiti kunye neListary Landscape eRoma yasePompeii ukuba le mibhalo ayizange ibonakale kufuphi ne- taberna , kodwa ngokwenene kufuphi neendawo ezintle zokuhlala. Kodwa abanye basinda; indawo kwiHerculaneum ibonisa ibha yamandulo yamatye, igcwaliswe ngeesusages, cutlets inyama, kunye namantongomane.
Amanqaku omntu ayeqhelekileyo, kwakhona: i-barpe yePompeiian yasePrama yaqhayisa i-cartoon malunga nexantathu yothando phakathi kwe-weaver egama lingu-Successus, iris, ne-Severus.
Kwaye omnye umntu othandekayo, kwiBar of Athictus, wabhala nje, "Ndiyifake i-barmaid."
Yintoni (iRoma) uMlawuli?
Ukuxhatshazwa kweMpi yamaRoma
Isivakalisi sokudibanisa (igrama kunye nokwakhiwa)
Buyela kwi-nos moutons
Ukusebenzisa iSpeyin 'Hayi'